အပဈရပျသကျတမျးထပျတိုးတာ တကယျရော အပဈရပျမှာလား – Voice of Myanmar
အပဈရပျသကျတမျးထပျတိုးတာ တကယျရော အပဈရပျမှာလား
စဈတှေ၊ စကျတငျဘာ ၂- ၂၀၂၀
မွောကျပိုငျး တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ မဟာမိတျအဖှဲ့တှဖွေဈတဲ့ ကိုးကနျ့ (MNTJP/ MNDAA)၊ တအောငျး (TSLF/TNLA)၊ ရခိုငျ (ULA/AA) တို့ဟာ သတ်တမအကွိမျမွောကျ ရကျပေါငျး (၇၀) ကွာ တဈဖကျသကျအပဈရပျကွညောခကျြကို မနေ့ စကျတငျဘာလ ၁ ရကျနေ့ ရကျစှဲနဲ့ မနကေ့ ထုတျပွနျလိုကျတာဖွဈပါတယျ။
TNLA သတငျးနဲ့ ပွနျကွားရေးတာဝနျခံ ဗိုလျမှူး မိုငျးအိုကျကြျောပွောတာက ” ကနြျောတို့က အရငျကလညျး အပဈရပျကွညောခကျြတှထေုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ အခုထုတျပွနျတာကလညျး ကနြျောတို့ ညီနောငျမဟာမိတျ (၃) ဖှဲ့ပေါငျးပွီးတော့ ထုတျပွနျတာပါ။ အဓိကတော့ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျတှဆှေေးနှေးတဲ့ အခြိနျမှာ အထောကျအကူဖွဈဖို့၊ ပိုပွီး ထိရောကျအောငျ အပဈရပျထားတာဖွဈတယျ။ နောကျတဈခုက ရှေးကောကျပှဲကာလမှာ လူထုတှကေ လှတျလပျစှာနဲ့ မဲပေးနိုငျအောငျ၊ နောကျတဈခုက ကိုဗဈဒုတိယလှိုငျးက မွနျမာနိုငျငံမှာ တျောတျောလေးမွငျ့တကျလာပွီ ရောဂါကွိုတငျကာကှယျရေးလုပျငနျးတှကေိုလညျး ထိထိရောကျရောကျ ဆောငျရှကျနိုငျဖို့အတှကျ ရညျရှယျပွီးမှ ထုတျပွနျရတာဖွဈပါတယျ။” လို့ ပွောပါတယျ။
တပျမတျောက ပွီးခဲ့တဲ့လက အပဈရပျထုတျပွနျခကျြမှာ ရခိုငျပွညျနယျမပါဝငျခဲ့ကွောငျးနဲ့ တကယျတမျးအပဈရပျမယျဆိုရငျတော့ အားလုံးပါဝငျဖို့ လိုတဲ့အပွငျ ရခိုငျပွညျနယျဖကျ အအေရှေိတဲ့ဖကျမှာ စဈရှိနျလြှေျာ့ဖိုလိုပွီး ဆှေးနှေးမှုလုပျတဲ့အခါပိုပွီး ထိရောကျမှာဖွဈကွောငျး ဗိုလျမှူးမိုငျအိုကျကြျောက ပွောပါတယျ။
ညီနောငျမဟာမိတျအဖှဲ့တှအေနနေဲ့ တဈဖကျသကျအပဈရပျသကျတမျးတိုးကွညောခကျြထုတျပွနျထားတာဆိုပမေယျ့ အဲဒီကာလအတှငျး တပျမတျောဖကျက တိုကျခိုကျလာမယျဆိုရငျတော့ ပွနျလညျခုခံသှားမှာ ဖွဈကွောငျး ထုတျပွနျထားတာဖွဈပါတယျ။
” ထုတျပွနျလိုကျတာကို ပွညျသူတှသေိရုံတငျမဟုတျဘဲနဲ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတှအေနနေဲ့ သူတို့ရဲ့ထုတျပွနျလိုကျတာကို တပျမတျောကရော၊ ပွညျထောငျစုအစိုးရဖကျကရော လကျခံနိုငျအောငျ တဈဆငျ့တိုးပွီးတော့၊ ပွညျထောငျစုအစိုးရနဲ့ ကမျးလှမျးဆကျသှယျတာ၊ တပျမတျောနဲ့ ကမျးလှမျးဆကျသှယျတာတှေ ဒါမြိုးအဆငျ့ထိတိုးလုပျနိုငျရငျတော့ ပိုအကြိုးရှိမယျလို့ မွငျပါတယျ။ နိုငျငံသူနိုငျငံသားတှအေနနေဲ့ အထူးသဖွငျ့ ကိုဗဈအန်တရာယျကို ပြံ့ပြံ့နှံ့နှံ့ရငျဆိုငျနရေတဲ့အခြိနျမှာ အပဈရပျတာကို လိုခငျြ၊ ရခငျြကွတာပေါ့။ ဒီအပဈရပျမှလညျးဘဲ ကိုဗဈရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျရေးအတှကျ လိုအပျတဲ့ပွငျဆငျ ကာကှယျမှုတှေ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ဆောငျရှကျနိုငျမှာပေါ့။” လို့ မွောကျပိုငျးသုံးဖှဲ့ရဲ့ ထုတျပွနျခကျြနဲ့ ပတျသကျပွီး သူ့အမွငျကို သုံးသပျပါတယျ။
တပျမတျောဖကျက ပွီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတျလ ၂၄ ရကျက ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေးနဲ့ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ လာမယျ့ စကျတငျဘာလ ၁ ရကျနကေ့နေ ၃၀ ရကျနအေ့ထိ အပဈရပျသကျတမျး ၁ လထပျတိုးလိုကျပွီး အကွမျးဖကျအဖှဲ့အစညျးတှရှေိတဲ့နရော မပါဝငျကွောငျး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးက ထုတျပွနျလိုကျတာဖွဈပွီး အထူးသဖွငျ့ အစိုးရက အကွမျးဖကျအဖှဲ့အစညျးအဖွဈ ကွညောထားတဲ့ အအေရှေိတဲ့နရောတှေ မပါဝငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
စဈရေးနဲ့ မွနျမာ့နိုငျငံရေးလလေ့ာသုံးသပျသူ စာရေးဆရာဦးမောငျမောငျစိုးသုံးသပျတာကတော့
” အဲဒါကတော့ တဈနှဈကြျော နှဈနှဈအတှငျးမှာတော့ တပျနဲ့ မွောကျပိုငျးအဖှဲ့တှေ အပွနျအလှနျကွညောနကွေတာပါပဲ။ နိုငျငံရေးအရပွောမယျဆိုရငျတော့ အပဈရပျကွညောတာသညျ ငွိမျးခမျြးရေးကို လိုလားကွတယျဆိုတဲ့သဘောထားကို အပွနျအလှနျဖျောပွဖို့ ကွိုးစားကွတယျလို့ပဲ ပွောရပါမယျ။ ဒါပမေဲ့ လကျတှမှေ့ာတော့ နှဈဖကျအပဈရပျမှသာလြှငျ အပဈရပျတာဖွဈပါလိမျ့မယျ။ မဟုတျဘူးဆိုရငျတော့ ဒီနှဈဖကျအပဈမရပျရငျတော့ တိုကျပှဲတှဆေကျရှိ နပေါလိမျ့မယျ။” လို့ သုံးသပျပွောဆိုပါတယျ။
အပဈရပျသကျတမျးတိုးတာတှရှေိပမေယျ့ လကျတှမှေ့ာ ထိတှတေို့ကျပှဲတှရှေိနကွေပွီး အထူးသဖွငျ့ တပျမတျောရဲ့ အပဈရပျအကွိမျကွိမျကွညောတဲ့အခါမပါဝငျတဲ့ အအေနေဲ့ တပျမတျောတို့ကွား စဈရေးအရှိနျလြှော့ခကြွဖို့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတှနေဲ့ နိုငျငံရေးလလေ့ာသုံးသပျသူတှကေ ထောကျပွနကွေတာဖွဈပါတယျ။ခုလို မွောကျပိုငျးမဟာမိတျ ၃ဖှဲ့ ခုလိုထုတျပွနျတဲ့နမှေ့ာ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ နိုငျငံရေး ဗြူရိုအဖှဲ့ဝငျ H.E. Mr. Yang Jiechi ဟာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့အကွီးအကဲတှနေဲ့ တှဆေုံ့ခဲ့တာနဲ့ တိုကျဆိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျလားရှိုးနဲ့ ၁၂ မိုငျအကှာလောကျမှာရှိတဲ့ ပနျခမျးရှာနဲ့ ပတျဝနျးကငျြရှာက ဒသေခံတှေ တိုကျပှဲဖွဈမှာစိုးလို့ဆိုပွီး လားရှိုးမွို့က မနျဆူဘုနျးကွီးကြောငျးကို ရုတျတရကျရောကျလာတဲ့အတှကျ ဒသေခံတှကေ လုံခွုံရေးနဲ့ရှေးကောကျပှဲအတှကျပါ စိုးရိမျနကွေတယျလို့ သိရပါတယျ။
#voiceofmyanmar #VOM #မွောကျပိုငျးမဟာမိတျ
Photo- Arakan Army (Website)
အပစ်ရပ်သက်တမ်းထပ်တိုးတာ တကယ်ရော အပစ်ရပ်မှာလား
စစ်တွေ၊ စက်တင်ဘာ ၂- ၂၀၂၀
မြောက်ပိုင်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ ကိုးကန့် (MNTJP/ MNDAA)၊ တအောင်း (TSLF/TNLA)၊ ရခိုင် (ULA/AA) တို့ဟာ သတ္တမအကြိမ်မြောက် ရက်ပေါင်း (၇၀) ကြာ တစ်ဖက်သက်အပစ်ရပ်ကြေညာချက်ကို မနေ့ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ မနေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
TNLA သတင်းနဲ့ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူး မိုင်းအိုက်ကျော်ပြောတာက ” ကျနော်တို့က အရင်ကလည်း အပစ်ရပ်ကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အခုထုတ်ပြန်တာကလည်း ကျနော်တို့ ညီနောင်မဟာမိတ် (၃) ဖွဲ့ပေါင်းပြီးတော့ ထုတ်ပြန်တာပါ။ အဓိကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆွေးနွေးတဲ့ အချိန်မှာ အထောက်အကူဖြစ်ဖို့၊ ပိုပြီး ထိရောက်အောင် အပစ်ရပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ခုက ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ လူထုတွေက လွတ်လပ်စွာနဲ့ မဲပေးနိုင်အောင်၊ နောက်တစ်ခုက ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ တော်တော်လေးမြင့်တက်လာပြီ ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးမှ ထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။
တပ်မတော်က ပြီးခဲ့တဲ့လက အပစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်မပါဝင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ တကယ်တမ်းအပစ်ရပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အားလုံးပါဝင်ဖို့ လိုတဲ့အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်ဖက် အေအေရှိတဲ့ဖက်မှာ စစ်ရှိန်လျှော့်ဖိုလိုပြီး ဆွေးနွေးမှုလုပ်တဲ့အခါပိုပြီး ထိရောက်မှာဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်မှူးမိုင်အိုက်ကျော်က ပြောပါတယ်။
ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ တစ်ဖက်သက်အပစ်ရပ်သက်တမ်းတိုးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတာဆိုပေမယ့် အဲဒီကာလအတွင်း တပ်မတော်ဖက်က တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ပြန်လည်ခုခံသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
” ထုတ်ပြန်လိုက်တာကို ပြည်သူတွေသိရုံတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တာကို တပ်မတော်ကရော၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရဖက်ကရော လက်ခံနိုင်အောင် တစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ ကမ်းလှမ်းဆက်သွယ်တာ၊ တပ်မတော်နဲ့ ကမ်းလှမ်းဆက်သွယ်တာတွေ ဒါမျိုးအဆင့်ထိတိုးလုပ်နိုင်ရင်တော့ ပိုအကျိုးရှိမယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ အထူးသဖြင့် ကိုဗစ်အန္တရာယ်ကို ပျံ့ပျံ့နှံ့နှံ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာ အပစ်ရပ်တာကို လိုချင်၊ ရချင်ကြတာပေါ့။ ဒီအပစ်ရပ်မှလည်းဘဲ ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင် ကာကွယ်မှုတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်နိုင်မှာပေါ့။” လို့ မြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့အမြင်ကို သုံးသပ်ပါတယ်။
တပ်မတော်ဖက်က ပြီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ်လ ၂၄ ရက်က ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးနဲ့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ကနေ ၃၀ ရက်နေ့အထိ အပစ်ရပ်သက်တမ်း ၁ လထပ်တိုးလိုက်ပြီး အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတဲ့နေရာ မပါဝင်ကြောင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် အစိုးရက အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ကြေညာထားတဲ့ အေအေရှိတဲ့နေရာတွေ မပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ရေးနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ စာရေးဆရာဦးမောင်မောင်စိုးသုံးသပ်တာကတော့
” အဲဒါကတော့ တစ်နှစ်ကျော် နှစ်နှစ်အတွင်းမှာတော့ တပ်နဲ့ မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေ အပြန်အလှန်ကြေညာနေကြတာပါပဲ။ နိုင်ငံရေးအရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ အပစ်ရပ်ကြေညာတာသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကို အပြန်အလှန်ဖော်ပြဖို့ ကြိုးစားကြတယ်လို့ပဲ ပြောရပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့ နှစ်ဖက်အပစ်ရပ်မှသာလျှင် အပစ်ရပ်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီနှစ်ဖက်အပစ်မရပ်ရင်တော့ တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိ နေပါလိမ့်မယ်။” လို့ သုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။
အပစ်ရပ်သက်တမ်းတိုးတာတွေရှိပေမယ့် လက်တွေ့မှာ ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေရှိနေကြပြီး အထူးသဖြင့် တပ်မတော်ရဲ့ အပစ်ရပ်အကြိမ်ကြိမ်ကြေညာတဲ့အခါမပါဝင်တဲ့ အေအေနဲ့ တပ်မတော်တို့ကြား စစ်ရေးအရှိန်လျှော့ချကြဖို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတွေက ထောက်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလို မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် ၃ဖွဲ့ ခုလိုထုတ်ပြန်တဲ့နေ့မှာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နိုင်ငံရေး ဗျူရိုအဖွဲ့ဝင် H.E. Mr. Yang Jiechi ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တာနဲ့ တိုက်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်လားရှိုးနဲ့ ၁၂ မိုင်အကွာလောက်မှာရှိတဲ့ ပန်ခမ်းရွာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရွာက ဒေသခံတွေ တိုက်ပွဲဖြစ်မှာစိုးလို့ဆိုပြီး လားရှိုးမြို့က မန်ဆူဘုန်းကြီးကျောင်းကို ရုတ်တရက်ရောက်လာတဲ့အတွက် ဒေသခံတွေက လုံခြုံရေးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပါ စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
#voiceofmyanmar #VOM #မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်